Orinasa mpangaro vovoka | China Powder Mixer mpanamboatra sy mpamatsy
Amin'ny maha mpitarika ny mpanamboatra mixer vovoka azy, TOPSGROUP dia manana traikefa amin'ny famokarana mihoatra ny 20 taona hatramin'ny 1998. Ny mixeur vovoka dia be mpampiasa amin'ny indostria maro toy ny sakafo, simika, fanafody, fambolena ary indostrian'ny biby ihany koa. Ny mixer vovoka dia afaka miasa tsy miankina na mifandray amin'ny milina hafa mba hanana tsipika famokarana continous.
TOPSGROUP dia manamboatra karazana mixeur vovoka. Na inona na inona tadiavinao ny fahaiza-manao kely kokoa na ny maodelin'ny fahaiza-manao lehibe kokoa, ny fampifangaroana vovoka fotsiny na ny fampifangaroana vovoka amin'ny granules kely hafa, na ny famafazana ranoka ao anaty vovoka, dia afaka mahita vahaolana eto foana ianao. Ny haitao mandroso sy ny patantika teknika tsy manam-paharoa manao mixer TOPSGROUP dia malaza eo amin'ny tsena.
Ny mixer amin'ny zana-kazo tokana dia mety amin'ny vovo-dronono sy vovoka, granule ary granule na manampy ranon-javatra kely amin'ny fampifangaroana, ampiharina amin'ny voanjo, tsaramaso, sarany na karazan-javamaniry granule hafa, ao anatin'ny masinina dia manana zoro elatra samihafa. Atsipy ny fitaovana ary ampifangaroana ny hazo fijaliana.
Ny mixer amin'ny zana-tsofa roa dia omena zana-kazo roa miaraka amin'ny lelany miolakolaka, izay mamokatra vokatra roa miakatra mahery, miteraka faritra tsy misy lanjany miaraka amin'ny vokatra mifangaro mahery.
Ity dia mixer vovoka marindrano, natao hifangaro amin'ny vovoka maina rehetra. Izy io dia misy tanky fampifangaroana marindrano miendrika U ary tarika roa mifangaro amin'ny kofehy mifangaro: ny kofehy ivelany dia mamindra ny vovo-drindrina hatrany amin'ny tendrony mankany afovoany ary ny fantsom-pitaovana anatiny kosa mamindra ny vovoka avy eo afovoany ka hatrany amin'ny faran'ny. Ity hetsika fanoherana ankehitriny ity dia miteraka fifangaroana homogen. Ny fonon'ilay tanky dia azo atao misokatra mba hanadiovana sy hanovana mora foana ny faritra.